OLAN’NY TANY ETSY ANDOHATAPENAKA : Hivoaka ny 17 febroary ny didim-pitsarana | NewsMada
Miandry ny fanapahan-kevitry ny fitsarana ny eo anivon’ny Mpanolotsaina monisipaly mpanohitra.
Niakatra fitsarana, omaly, teny anivon’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana ny raharaha momba ny fanafoanana fangatahana fanapahan-kevitry ny Kaominina. Goavana ny nanomezan’ny orinasa Tiko ny tany etsy Andohatapenaka ho an’ny Kaominina hanaovana fampiantsoanana fiara, izay toherin’ny mpanolotsain’ny monisipaly mpanohitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Nilaza ny mpisolovava ny mpanolotsaina monisipaly mpanohitra, Ravonison Tsiferana fa « araka ny noeritreretina ny fandehan’ny raharaha. Ny fitsarana koa aza, efa nanambara fa mizotra mankany amin’ny fanafoanana ilay fanapahan-kevitra laha 14/ cua/cm/del/16, tamin’ny 29 jolay 2016, navoaka tamin’ny fivoriana tsy ara-potoan’ny filankevitra monisipaly izy ity ». Araka ny fantatra, hivoaka amin’ny 17 febroary izao ny didim-pitsarana momba ity fanafoanana ny fanapahan-kevitry ny Kaominina Antananarivo renivohitra ity.
Navoitran-dRavololomanana Lalatiana mpanolotsaina mpanohitra sady mpitory ato anatin’ity raharaha ity fa « mifangaro voraka ny fitantanana ny raharaham-pianakaviana sy ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo ary ny raharahan’orinasa eo amin’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo. Nisy ny fehinteny natolotra ary heverina fa anatin’ny fahendrena tanteraka no anatontosan’ny fitsarana ny fanajana ny lalàna ». Nanteriny fa mampanahy izao raharaha izao ny fanodinkodinana fahefan-dRavalomanana Lalao ben’ny Tanàna mankamin’ny tombontsoa manokan’ny orinasa Tiko. Efa nanakana io fanapahan-kevitra io ny avy eo amin’ny mpanolotsaina mpanohitra eo anivon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy ara-dalàna satria tao anatin’ny hamehana no nanatontosana azy ary tsy ao anaty lahadinika ny fanatanterahana azy io, raha ny fanampim-panazavany. Mbola ao anaty fifanolanan’ny orinasa Tiko sy ny fanjakana ity olan’ny tany etsy Andohatapenaka ity, saingy atao fitaovana ny mpanolotsaina monisipaly.
Manoloana ny gaboraraka sy kiantranoantrano eo anivon’ny fitantanana ny tanànan’Antananarivo, manao antso avo amin’ny fanjakana ny eo anivon’ny mpanolotsaina monisipaly mpanohitra ny handefasana ny Fisafoan-draharaham-panjakana Ankapobe (IGE) hitsirika ny tsy fahaiza-mitantana eo anivon’ity Kaominina ity.